နီပေါနိုင်ငံ၊ ကြီးမားသောတောင်တန်းဒေသနှင့်အိပ်မက်လှပသည့်ရှုခင်းများ | Absolut ခရီးသွားခြင်း
နီပေါသည်ကုမ္ပဏီကြီးနှစ်ခုအကြားနယ်စပ်တွင်တည်ရှိသောနိုင်ငံငယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အိႏၵိယ။ တောင်ထိပ်အချို့ပါဝင်သောတောင်တန်းဒေသနှင့်အတူ ဟိမဝန္တာသင်သည်တောင်တက်ခြင်းသို့မဟုတ်တောင်တက်ခြင်းတို့ကိုနှစ်သက်ပါက၎င်းမှမြင်နိုင်သောအထင်ကြီးဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ပါကအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည် Annapurna သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင် ဧဝရက်.
သင်၌စွန့်စားနိုင်သောစိတ်ဓာတ်မရှိလျှင်နီပေါတွင်သင့်အားကမ်းလှမ်းရန်အခြားအရာများရှိသည်။ သင်ကဲ့သို့မြို့ကြီးများသို့သွားရောက်နိုင်သည် Patan, ကတ္တမန္ဒူ o aktအလယ်ခေတ်,ရိယာများ၊ သာယာလှပသည့်နန်းတော်များနှင့်ဝှက်ထားသောဘုရားကျောင်းများရှိသည်။ သင်လည်းသိနိုင်သည် သဘာဝပန်းခြံများ။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုနီပေါသည်သင်ရောက်ရှိရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည် နိဗ္ဗာန်။ သင်သိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့နောက်လိုက်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
1.1 rest ၀ ရက်တောင်နှင့်အန္နာပနာ
1.4 ကတ္တမန္ဒူမြစ်၊ နီပေါနိုင်ငံရှိနောက်ထပ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလမ်းကြောင်းတစ်ခု
1.5 Pokhara, နီပေါ၏အခြားခရီးသွားမြို့
ကျွန်ုပ်တို့သည်နီပေါနိုင်ငံသို့လေ့ကျင့်ခန်းအနည်းငယ်ဖြင့် စတင်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏လှပသောတောင်တန်းများနှင့်မလှပသည့်အခြားသဘာဝareasရိယာများကိုမမေ့ဘဲ၎င်း၏အဓိကမြို့ကြီးများနှင့်၎င်း၏မြင့်မြတ်သောနေရာများကိုသိနိုင်သည်။
rest ၀ ရက်တောင်နှင့်အန္နာပနာ
နီပေါရဲ့အဓိကဆွဲဆောင်မှုနှစ်ခုဖြစ်တဲ့နီးကပ်လာဖို့သင်ဟာတောင်တက်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ပါ ဧဝရက် နှင့် Annapurna။ သင်တက်နိုင်ပါတယ် အခြေစိုက်စခန်း ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်မီတာ ၅၀၀၀ ကျော်သောပထမဆုံးဖြစ်သည်။ သင်နိဂုံးချုပ်သည်အတိုင်း၊ ၎င်းသည် ၁၄ ရက်ကြာသောကြောင့်ခရီးစဉ်သည်မလွယ်ကူပါ။ အမြင့်မှအနာသည်၎င်းကို ပို၍ ပင်ခက်ခဲစေသည်။ သို့သော်၎င်းသည် visitors ည့်သည်အများစုအတွက်တတ်နိုင်သည်။ သင်လိုအပ်လိမ့်မည် အထူးခွင့်ပြုချက်ဒါပေမယ့်အတွေ့အကြုံကကျိုးနပ်သည်။
သင်တို့သည်လည်း Annapurna အပေါ်တောင်တက်သွားနိုင်ပါတယ်။ အတူတူ၊ သူတို့ဟာကီလိုမီတာနှစ်ရာ့ငါးဆယ်ခရီးလမ်းကြောင်းကိုအဆင့်ဆင့်နဲ့သီးခြားစီပြုလုပ်နိုင်တယ်။ သို့သော်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုသင်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်ထူးခြားသောတောင်တန်းရှုခင်းများ.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, စိတ်ကိုထားပါ ရာသီဥတု။ ဤတောင်များကိုသွားရန်အကောင်းဆုံးလများသည်အောက်တိုဘာ၊ နို ၀ င်ဘာနှင့်ဒီဇင်ဘာတို့ဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်နှင့်မတ်လ၊ Aprilပြီနှင့်မေလများဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီနှင့်ဖေဖော်ဝါရီတို့ကိုအပူချိန်နိမ့်ခြင်းနှင့်နှင်းများကျခြင်းတို့ကြောင့်မထောက်ခံပါ။ ဇွန်လ၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လနှင့်စက်တင်ဘာတို့တွင်လမ်းကြောင်းများသည်ခက်ခဲစေသည့်မိုးရာသီဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်သင့်တော်သောလများအတွင်းတောင်များကိုလည်ပတ်ရန်ခရီးသည်အမြောက်အများသည်သူတို့၏လမ်းကြောင်းများပြုလုပ်လိုကြသည်မှာလည်းမှန်ကန်သည်။
တော်ဝင် Chitwan အမျိုးသားဥယျာဉ်
အာရှတိုင်းပြည်တွင်သဘာဝဥယျာဉ်များစွာရှိသည်။ သင်လည်ပတ်နိုင်သည် Bardia ၏, အနောက်တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်နှင့်၎င်း၏ဘင်္ဂလားကျားနှင့်itsရာမမိကျောင်းကျော်ကြား။ OR Langtang မှာတစ်ခုနှင်းများနှင့်ကျားသစ်များရှိရာ၊ ဒါပေမယ့်အားလုံးအထက်မှာ၊ သင်စာရင်းပြုစုထားတဲ့ပန်းခြံနှစ်ခုကိုသင်သိရမည် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်.
ပထမတစ်ခုဖြစ်သည် Sagarmatha ထံမှတ၏ဒေသတွင်း၌တည်သော ကုမ်ဘူ theဝရက်တောင်ထိပ်၏အကောင်းတစ်အစိတ်အပိုင်းကိုဖုံးအုပ်။ သင်သည်သင်၏ခရီးစဉ်စတင်နိုင်ပါသည် center ည့်သည်စင်တာ, သောမြို့၌တည်ရှိ၏ Namche စျေး။ Autochthonous မျိုးစိတ်များသည်တိဗက်နယ်မြေသွင်ပြင်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယတစ်ခုမှာ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည် တော်ဝင် Chitwan အမျိုးသားဥယျာဉ်နိုင်ငံ၏တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်တော်ဝင်အရံဖြစ်ခဲ့သည်။ သင့်နာမည်ဆိုလိုသည် "တောနက်၏စိတ်နှလုံး", သင်ကသင်တွေ့လိမ့်မည်သောအပင်များ၏စိတ်ကူးကိုငါပေးမည်။ ယင်း၏တိရစ္ဆာန်များသည်အိန္ဒိယကြံ့များသို့မဟုတ်ဂင်္ဂါစရိုက်များကဲ့သို့သောမျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိသည့်မျိုးစိတ်များစွာရှိသည်။ သေးငယ်သောနှာရည်သည်ငါးကိုသာစားရန်ခွင့်ပြုသည်။
ကတ္တမန္ဒူသို့လည်ပတ်ရန်မှာလမ်းမများ၊ ကြီးမားသောညစ်ညမ်းမှုများနှင့်ဆူညံသံများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောလူ ဦး ရေတစ်သန်းရှိသောမြို့တစ်မြို့သို့ ၀ င်ရောက်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ငလျင်ကြောင့်ပျက်စီးခဲ့သည့်အချို့သောအံ့သြဖွယ်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများကိုအသုံးပြုခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
သင် Kathmandu သို့ပထမဆုံးသွားသင့်သည် Durbar ရင်ပြင်, တော်ဝင်မိသားစုများအတွက်နေထိုင်ရာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သောနျူကလိယ။ တကယ်တော့, နေပြည်တော် နန်းတော်ကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည်ရင်ပြင်နှင့်အဆောက်အ ဦး များနှင့်ဘုရားကျောင်းများဖြင့်စတုရန်းပေနှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိသည့်လမ်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဒါပေမယ့်အရှိဆုံးစပ်စုအရာဖြစ်၏ အဆိုပါ Kumari ၏အိမ်တော်ကို။ ဤသည်မှာအမည်တူနတ်ဘုရားကိုကိုယ်စားပြုရန်ရွေးချယ်ထားသောမိန်းကလေးငယ်အားပေးသောနာမည်ဖြစ်သည်။ သူမသည် Newar ယဉ်ကျေးမှု၏ပုံသဏ္andာန်ဖြစ်ပြီး၊ သူငယ်မသည် Kumari ဖြစ်လာရန်၊ စမ်းသပ်မှုများစွာပြုလုပ်ရမည်။ ထို့အပြင်သူ၏အခန်းကဏ္ last သည်ကြာရှည်နေသော်လည်းသူသည်မိမိ၏အိမ်တော်ဘုရားကျောင်းကိုလုံးဝမစွန့်လွှတ်နိုင်ပါ။
သငျသညျကိုလည်း Kathmandu အတွက်တွေ့မြင်ရပေမည် Boudhanath stupaကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဗုဒ္ဓ ၀ င်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ နေ့လည်ခင်းတိုင်းတစ်နိုင်ငံလုံးမှဘုန်းတော်ကြီးများသည်၎င်းပတ်လည်တွင်ဆုတောင်းကြသည်။ ထို့အပြင်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်၌တိဘက်လက်မှုဆိုင်များနှင့်စျေးဆိုင်များစွာရှိသည်။
ဒါ့အပြင်သင်ချဉ်းကပ်သင့်ပါတယ် Swayambhunath ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးမြို့တစ်မြို့လုံးကိုသင်မြင်တွေ့ရမည့်တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်တွင်တည်ရှိသောထူးခြားသည့်မျောက်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ နောက်ဆုံး၊ Kopan နှင့် Phullari ဘုရားကျောင်းများ နှင့်အတွက်အနားယူ အိပ်မက်ဥယျာဉ်Kathmandu အလယ်တွင်လှပသော neoclassical ဒီဇိုင်းဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကတ္တမန္ဒူချိုင့်ဝှမ်းဟုခေါ်သောအခြားမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်သောပါတန်နှင့် Bhaktapur အပြင်စုစုပေါင်းမြို့ကြီးများကိုသင်မသိဘဲမြို့တော်မှမထွက်ခွာနိုင်ပါ တစ်ရာသုံးဆယ်အထိမ်းအမှတ ထိုကဲ့သို့သောအရေးပါမှု၏asရိယာအဖြစ်ခွဲခြားထားပြီး အန္တရာယ်ရှိကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ.
Patan သူ့မှာကိုယ်ပိုင်ရှိတယ် Durbar ရင်ပြင်ရှေးဟောင်းဘုရင်များ၏နန်းတော်ဝင်းလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ကဲ့သို့သောဘုရားကျောင်းအများအပြားရှိသည် Krishna ဟိန္ဒူOctagon ကျောက်၊ အဆိုပါ Degutale o Vishwanath၎င်း၏ကျောက်ဆင်နှင့်အတူ။ သူတို့အားလုံးကို ၁၇ ရာစုမှာတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးနာမည်ပေးထားတဲ့ဟင်းလင်းပြင်တွေနဲ့ခွဲထားတယ် နင်.
အကွောငျး aktနိုင်ငံ၏အဓိကယဉ်ကျေးမှုအရအာရုံစိုက်မှုဟုလည်းယူမှတ်ကြသည် Durbar စတုရန်း။ ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်၌, သင်ကဲ့သို့သောဆောက်လုပ်ရေးရှိသည် Windows ၅၀ ၏နန်းတော်, အ ရွှေတံခါး နှင့်ဘုရားကျောင်းကြိုက်တယ် အဆိုပါ Batsala၎င်း၏ကြီးမားသောခေါင်းလောင်းနှင့်အတူ အဆိုပါ Pashupatinath၎င်း၏ထူးခြားသောခေါ်ဆောင်သွားအက္ခရာများနှင့်အတူ။
သူတို့ကမြို့ထဲမှာတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ ဗိမာန်တော် Changu narayan၎င်းမှ ၅ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးသည်တစ်နိုင်ငံလုံးတွင်အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်သည် နီတပေါလTaumadhi ရင်ပြင်နှင့်အမြင့်ငါးခုပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည်နီပေါနိုင်ငံတွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။
ဤမြို့သည်ယခင်ခရီးသွားများနှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားပြီးနိုင်ငံအတွင်းဒုတိယခရီးသွား most ည့်သည်ဖြစ်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ပတ် ၀ န်းကျင်နားမှာလာလည်ပတ်တာကအထင်ကရအထိမ်းအမှတ်တွေ (သူတို့ကိုတွေ့ရပေမယ့်) ကိုမမြင်ရဘူး အံ့သြဖွယ်ရာအမြင်များ.
၃၀ ကီလိုမီတာမျှအကွာတွင်တောင်တန်းသည်မီတာ ၇၀၀၀ နီးပါးမြင့်တက်ကာအံ့မခန်းဖွယ်ချိုင့်ဝှမ်းများဖြစ်လာသည်။ သူတို့တွင်ထင်ရှားပါစေ မြစ် Gandaki အပေါ်တကမ္ဘာပေါ်တွင်အနက်ဆုံးဖြစ်သည်။ မင်းလည်း Poghaka ဒေသမှာရှိတယ် ပဝဲအိုင်၎င်း၏အထင်ကြီးဖွယ်ရေတံခွန်နှစ်ခုနှင့်အတူ၎င်း၏ရေသည်သူတို့မှတဆင့်ပြုတ်ကျပြီးနောက်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
ကိုယ့်အိုင်၌ရှိသောကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်တွင်သင်ရှိသည် Barahi ဘုရားကျောင်းမြို့တော်အဟောင်းမှာရှိနေတုန်း၊ Bindhyabasini y Bhimsen။ ထို့အပြင် Pokhara သည်ဟိမဝန္တာသို့လေ့လာရေးခရီးများအတွက်အဓိကစမှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်နေထိုင်သူအရေအတွက်နှင့်စက်မှုထုတ်လုပ်မှု၏အဓိကအချက်အချာနေရာများတွင်နီပေါနိုင်ငံ၏ဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်သည်။ အဲဒါကြောင့်မင်းတို့ကိုငါတို့ပြောနေတာပဲ။ သို့သော်၎င်းသည်အနည်းငယ်သောတစ်ခုဖြစ်သည် အသုံးစရိတ်လည်ပတ်မှု အထူးသဖြင့်မှတ်သားလောက်သောအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး များမရှိသောကြောင့်နီပေါနိုင်ငံသို့သင်သွားရောက်ခဲ့သည်။
အာရှတိုင်းပြည်၏ gastronomy သည်လွှမ်းမိုးမှုများစွာ၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာအိန္ဒိယ၊ တရုတ်နှင့်တိဘက်အိမ်နီးချင်းများဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းတွင်ထိုင်းအစားအစာများပါဝင်သည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အမဲသားနဲ့ဟင်းပွဲတွေကိုဘယ်တော့မှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး၊ မြင့်မြတ်သောတိရိစ္ဆာန် ၎င်း၏လူ ဦး ရေ၏ကောင်းတစ် ဦး အစိတ်အပိုင်းအတွက်။
အဲဒီအစားမင်းမှာကျွဲနဲ့ဆိတ်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့အမျိုးသားအဆင့်စာရွက်ကတော့ dal bhat tarkariပဲလေးဟင်းချို၊ ဆန်နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းများကိုပေါင်းစပ်ထားသောဟင်းပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ သီးခြားစီပါ ၀ င်သောဗန်းတွင်၎င်း၊ ချဉ်များ၊ ထုံးများ၊ သံပုရာများသို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်ငရုတ်သီးများပါ ၀ င်သည်။
နောက်ထပ်ရိုးရာပန်းကန်တစ်ခုဖြစ်သည် Momoတိဗက်လမ်းနှင့်အမွှေးနံ့သာများနှင့်ပြုလုပ်ထားသောဘောဇဉ်များပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့သည်ကျွဲ၊ ဆိတ်သို့မဟုတ်ကြက်သားအသားဖြင့်သာမကဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြင့်ပါပြင်ဆင်ထားသည်။ သူ၏အနေဖြင့် Chow မိန်း သို့မဟုတ်ကြော်သောခေါက်ဆွဲများကိုတရုတ်အစားအစာမှလာသည်။
အခြားပုံမှန်ဟင်းလျာများဖြစ်ကြသည် ကာချီလာ သို့မဟုတ်နံ့သာမျိုးနှင့်အမဲသား၊ syen ဒါမှမဟုတ်ကြော်ထားတဲ့အသည်း၊ ပူကာလာ ဒါမှမဟုတ်ကြော်ထားတဲ့အသား၊ ကတီ သို့မဟုတ်ပဲဟင်းချိုနှင့် wo ဒါမှမဟုတ်ပဲဟင်းပဲ။ အချိုပွဲသည်အလွန်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသည် နေခြည် သို့မဟုတ်ဒိန်ချဉ်နှင့် ဝမ်းပျက်ချဉ်သောယိုတစ်မျိုး။
ငံပြာရည်နှင့်အတူ momos တစ်ပန်းကန်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အချိုရည်, လက်ဖက်ရည်အမျိုးသားရေးဖြစ်ပါတယ်။ တောင်တန်းဒေသများတွင်နွေးရန်သူတို့သည်အလွန်အားကောင်း။ ထောပတ်ဖြင့်ယူကြသည်။ ဒါပေမယ့်လည်းသင်စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ် ဆန်သို့မဟုတ်ဘီယာ; အဆိုပါ ကြံဖျော်ရည် သကြားဓာတ်၊ က မေ, အရာထောပတ်သို့မဟုတ် ရာခီတစ် ဦး Millet ကိုပေါင်းခံ။
အာရှနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ရှိတယ် Kathmandu ၏ Tribhuvanကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှလေယာဉ်များရောက်ရှိလာသည်။ အဲဒီမှာပြီးတာနဲ့, သင်သည်အခြားမြို့များမှခရီးစဉ်ရှိသည်။ သို့သော်နီပေါနိုင်ငံရှိအခြားလေဆိပ်များသည်သေးငယ်ပြီးအချို့သောတောင်တန်းများကြောင့်အလွန်အန္တရာယ်များသောကြောင့်သူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။ ထို့အပြင်လမ်းကြောင်းဖြစ်စေသည့်လေယာဉ်များသည်အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသည်။
များစွာသောခရီးသွားများသည်နယူးဒေလီမှနီပေါသို့သွားလိုကြသည်။ သူတို့ကလုပ်ပါ tren ၏နယ်စပ်မြို့ရန် Raxaul, နေဆဲပိုင်ဆိုင်ရာ အိႏၵိယထို့နောက် Kathmandu သို့ဘတ်စ်ကားစီးပါ။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဆက်သွယ်ရေးသည်နီပေါ၏ခိုင်မာသောဝတ်စုံမဟုတ်ပါ။ လမ်းများအလွန်အမင်းအခြေအနေတွင်ရှိပြီးမြို့ကြီးများကိုဆက်သွယ်သောဘတ်စ်ကားများသည်စျေးပေါသကဲ့သို့ပင်မသက်မသာဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများမှအနည်းငယ်ပိုစျေးကြီးသော်လည်းအခြားအရာများမှာမူအဆင်ပြေသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ညအချိန်တွင်၎င်းတို့ကိုသင်သွားရန်အကြံမပေးပါ။ ယာဉ်မောင်းများမကြာခဏပြေးရန်အချည်းနှီးသောလမ်းများ၏အားသာချက်ယူ မတော်တဆမှုများဘုံဖြစ်ကြသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်ခရီးဆောင်အိတ်များမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုသော့ခလောက်ဖြင့်သော့ခတ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးပါသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, နီပေါဥပဒေများကသင့်အားအငှားကားမောင်းရန်တားမြစ်ထားသည်။ အဲဒီအစား, သင်ငှားရမ်းရန်အဘို့အလွယ်ကူပါလိမ့်မယ် ယာဉ်မောင်းနှင့်အတူတ ပြီးတော့စျေးလည်းမကြီးပါဘူး နောက်ဆုံးတော့အဓိကမြို့ကြီးတွေကိုလှည့်ပတ်ဖို့သင်မှာလူကြိုက်များသည် အချစ်ရယ် နင်းနှင့်လျှပ်စစ်နှစ်မျိုးလုံး (ဒါခေါ်) မိုးဇက်, အဘယ်သူသည်ပိုကြီးတဲ့), အဖြစ်မီနီဘတ်စ်ကား။ စူးစမ်းလိုစိတ်တစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းတို့အားဖယ်ထုတ်ရန်မျက်နှာကြက်ကိုဒင်္ဂါးတစ်ပြားနှင့်ရိုက်ရမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောပါမည်။
Patan ၏ Durbar ရင်ပြင်
အာရှနိုင်ငံထဲဝင်ရန်သင်၌ရှိရမည် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အနည်းဆုံးခြောက်လတရားဝင်။ ဒါ့အပြင်သင်တစ် ဦး လိုအပ်ပါတယ် အထူးဗီဇာ မင်းဘာလုပ်နိုင်လဲ အွန်လိုင်း ထဲမှာ ဝဘ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနသို့မဟုတ်ဘာစီလိုနာကောင်စစ်ဝန်ရုံးမှလာသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဟိမဝန္တာတောင်သို့သွားရောက်ရန်သို့မဟုတ်အခြားတောင်ကိုသွားရန်လိုအပ်ပါကသင်သည်လည်းလိုအပ်သည် အချိန်, သင်ဆိုက်ရောက်အပေါ်ကိုသင်လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်အထူးပါမစ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ဝတ်ဆင်ရန်ရှိသည် အမျိုးမျိုးသောကာကွယ်ဆေးများ။ အသုံးများဆုံးမှာအူရောင်ငန်းဖျား၊ အဝါရောင်အဖျား၊ ဝမ်းရောဂါ၊ MMR၊ ငှက်ဖျားရောဂါလည်းမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ သို့သော်သင်၏မိသားစုဆရာဝန်ကသင့်အကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံချက်သည်သင်တစ် ဦး ငှားရမ်းရန်ဖြစ်သည် ကောင်းမွန်သောခရီးသွားအာမခံ မတော်တဆဖြစ်မှု (သို့) ဖျားနာတဲ့အခါသင့်ကိုကောင်းကောင်းဂရုစိုက်ပါစေ။
တိုင်းပြည်ရဲ့ငွေကြေးကဒါပဲ နီပေါရူပီး။ ယူရိုငွေကိုဒေါ်လာသို့ပြောင်းလဲရန်နှင့် Kathmandu လေဆိပ်တွင်တစ်ချိန်တည်းတွင်ဒေသန္တရငွေကြေးဖြင့်လည်းအလားတူပြုလုပ်ရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည်။ မြို့ကြီးတွေမှာလဲအိမ်တွေလဲလဲရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကနောက်ထပ်ကော်မရှင်တစ်ခုထပ်ပေးရတယ်။
နောက်ဆုံးသင်မှတ်ပုံတင်ရန်အကြံပြုပါသည် ခရီးသွားများမှတ်ပုံတင်ခြင်း စပိန်နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှပြproblemsနာများပေါ်ပေါက်လာလျှင်ပိုမိုလွယ်ကူစွာတည်ရှိသည်။ ပြီးတော့နီပေါနိုင်ငံမှာမင်းကသောက်တယ် ယူဂိုဆလားဗီးယားရေ နှင့် မသန့်ရှင်းသောအသီးများ၊ ခေါ်ဆိုမှုကိုရှောင်ရှားရန် "ခရီးသွားဝမ်းလျှော".
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့နီပေါဟာသင့်ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့လှပတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပါ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအမြင့်ဆုံးတောင်များ။ ထို့အပြင်မြောက်မြားစွာအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး များနှင့်အနောက်တိုင်းတစ်ခုနှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသော gastronomy ။ မင်းအသက်ရှင်ချင်ရင် ကွဲပြားခြားနားသောအတွေ့အကြုံအာရှတိုက်သို့သွားရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » နီပေါ